Fanaovan-gazety sy mozika : nodimandry i Jean Félicien Ratefy | NewsMada
Fanaovan-gazety sy mozika : nodimandry i Jean Félicien Ratefy
Feo miavaka. Fomba fitendry zavamaneno, mahasarika. Tsy ho re intsony ireo… Nodimandry i Jean Félicien Ratefy.
Vokatry ny fahatapahan’ny lalandra any amin’ny fo, nodimandry ny 31 oktobra teo, teo amin’ny faha-73 taony i Jean Félicien Ratefy. Mpanao gazety mpikambana ao amin’ny fikambanan’ny mpanao gazety zokiolona. Anisan’ny tena nahafantarana an’i Jean Félicien Ratefy ny maha andrarezin’ny kolontsaina azy. Izy no nanangana ny Cours de musique Ratefy na ny CMR etsy Ankadifotsy, izay efa namoaka mpianatra marobe sy manana ny maha izy azy. Mpampianatra « clavier » izy. Mpitendry orga any am-piangonana. Nisahana fandaharana fampianarana mozika sy tontolon’ny zavakanto tao amin’ny Radiom-pirenena malagasy (RNM). « Anisan’ireny ny « Sehatra », « Chante ma valiha » ary ny « Telomiova » », hoy i Seta Ramaroson.
Anisan’ny asa nikelezany aina ny fampitoviana lenta ny fampianarana mozika eto Madagasikara sy ny any ivelany. « Vitsy amin’ny Malagasy ny hahavita hianatra mozika any ivelany noho ny sarany lafo dia lafo », hoy Ratefy. Nikaroka vahaolana izy ka nahita ny « Associated board of the Royal schools of music » na ny ABRSM, izay ankatoavina maneran-tany ny mari-pahaizana omeny. Nahatonga mpitsara teto ny ABRSM hany ka afaka notontosaina teto Antananarivo ny fanadinana. Taty aoriana, afaka nalefa tany amin’ny foiben’ny ABRSM ihany koa ny taratasim-panadinana mba hotsaraina. Raha ny filazan’i Seta Ramaroson : « teo am-pikarakarana ity fanadinana iraisam-pirenena ity izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao ».
Rahampitso, amin’ny 12 ora sy sasany no hoentina ao amin’ny Ekar Ankadifotsy ny nofomangatsiakan’i Jean Félicien Ratefy. Eny Imerimandroso Ivato kosa no hanatanterahana ny fandevenana. Mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviana manontolo sy ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny Gazety Taratra.